Flekosteel gel order na Kano na mbelata
Flekosteel na Kano Naijiria
Nweta enyemaka mgbu nkwonkwo Flekosteel na Kano
Gel megide nkwonkwo na mgbu azụ Flekosteel ga-eme ka mmụghachi nke anụ ahụ cartilage ngwa ngwa. Ị nwere ike nweta gel na obodo Nigeria na webụsaịtị gọọmentị nke ụlọ ọrụ ahụ. Ị nwekwara ike ịtụ ịnyefe na Kano. Ọnụ ego mbelata bụ naanị ₦14990, nkwalite ahụ nwere oke.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịtụ ọgwụ ugbu a maka nkwalite, ị ga-emejupụta mpempe akwụkwọ na webụsaịtị ụlọ ọrụ ahụ. Ọ dị mkpa ka ị dee n'ọhịa nke ụdị usoro - aha na nọmba ekwentị, na onye njikwa anyị ga-akpọ n'ime otu awa site na ụlọ ọrụ ahụ maka nyocha na usoro na ndebanye aha nke ngwa maka nnyefe na adreesị gị. Tupu ịtụ ahịa, anyị na-akwado ka ị mụọ ntuziaka maka ojiji Flekosteel. Ịkwụ ụgwọ maka ngwugwu ahụ site na ego na-ebuga onye na-ebuga ya ma ọ bụ site na mail.
Otu esi azụta na Kano Flekosteel
Nye iwu gel megide mgbu na nkwonkwo na azụ Flekosteel na Kano
Ọtụtụ nwere mmasị na ebe ị nwere ike ịtụ Flekosteel gel maka nkwonkwo na azụ na ọnụ ahịa ọnụ ahịa? Enweghị ike ịchọta gel na counters nke ụlọ ahịa ọgwụ na-anọghị n'ịntanetị na Kano, yana na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ ọgwụ. Ọ ga-ekwe omume ịzụta ọgwụ naanị na webụsaịtị gọọmentị nke onye nrụpụta, dejupụta mpempe akwụkwọ ka onye ọrụ anyị wee kpọtụrụ gị. Taa enwere mbelata, ọnụahịa ngwaahịa ahụ bụ naanị ₦14990, ọnụ ahịa nnyefe na Kano (na Nigeria), lelee onye ọrụ.
Ọnụ ego iji zipu ngwugwu na adreesị gị nwere ike ịdị iche na obodo ndị ọzọ. Mgbe onye njikwa ahụ kpọchara, chere maka ngwugwu ahụ ma kwụọ ụgwọ ngwa ahịa mgbe ị natara ya. Ịkwụ ụgwọ naanị mgbe ị nwetasịrị ngwugwu ahụ na adreesị gị, ị nwekwara ike iji aka ma ọ bụ kaadị kwụọ onye na-ebufe ya. Ogologo oge nkwalite ahụ nwere oke. Mee ngwa ngwa ịtụ ahịa na mbelata 50%. Ị nwere ike ịtụ ngwongwo na Kano (Nigeria) ugbu a.
ịtụ ịtụ Flekosteel na Kano 50% nke ọ bụla